နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၆ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၆ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ)
နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၆ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ)
Posted by Kyaemon on Nov 29, 2013 in Arts & Humanities, Cultures, Education, Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 13 comments
Aphrodite France Louvre Paris Venus de Milo
Louvre ပြတိုက်ကို လိုက်ကြည့်ရအောင်၊
အဲလီဇဘက်တေလာရဲ့ ကလီယိုပတ်ထရာကို ပြန်ကျိရတော့
ပုံထဲကအတိုင်း ရွေခေါင်းဆောင်းကြီးနဲ့ အတော်ကိုလှပါတယ်…
မန့်ကြတဲ့ ဟိုခေတ်က “ခါးတုတ်ဗိုက်ပူပဲ” အကြောင်းကိုလဲ
တလက်စာ လေ့လာခွင့် ရပါ့မယ်၊
Louvre ပြတိုက်ဆီလာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်တွေကVenus de Milo ဗီနပ်စ်ရုပ်ထု နဲ့
မပြုံးတပြုံးMona Lisa မိုနာလီစာပန်းချီကားတွေကို
သူတို့ရဲ့ခန်းမတွေမှာဆိုရင် လူတွေက အမြဲလိုလို
သာမန်လျှံကာ “အမြန်ကြည့်” သွားကြတယ်၊
ကြည့်စရာတွေကများလို့လဲ ပါ ပါတယ်၊
ဒီပို့စ်မှာVenus de Milo ဗီနပ်စ် ရုပ်ဟုတွေကို အဓိက ထားပြီး တင်ပြတာပါ၊
Venus ဗီနပ်စ် က Cleopatra ကလီယိုပတ်ထရာ ထက်ချောတယ်လှတယ် လို့ယူဆကြတယ်၊
ဘာဘဲပြောပြော သမတ ဦးသိန်းစိန်က တောင်
Venus ဗီနပ်စ်ရုပ်ထုကို ရအောင် ကြည့်သွားသေးတာ၊
ဒို့လဲ အားကျမခံ ကြည့်သွားရမှာပေါ့၊
Venus ဗီနပ်စ်ရုပ်ထုက အနုပညာမြောက်တယ်လို့
နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကမ်ဘာမှာ ကျော်ကြားခဲ့ပြီး၊
အေးအေးလူလူ နဲ့ ဘက်စုံအောင်ကြည့်ရလို့
ဝင်ကြေးပေးပြီး တိုးဝှေ့ရတဲ့သူတွေ ထက်တောင်
တပန်း “သာ” သွား မ လား တွေးမိရတယ်၊
ကြောင်ယီး က ရှာရာပိုဗာ ကို လိုက် ငန်း လို့ (အောက်ပါပုံတွေ)
မြန်တျန့်သားတို့ အချွတ်ကြမ်း ရှာရာပိုဗာ မလာတမ်း..
အူးကြာင်ယီးကတော် ကဖြင့် Louvre ပြတိုက် ဆီလာပြီး၊
လှိုင်မင်းသမီးလို Pyramid ပြူတင်းပေါက် ကနေ “မယ်ခုမျှော်”
( လူပုံလယ်မှာ အူးကြောင်ယီး ကိုဂလဲ့စားချေတာနော်
ဒက်ဒီကြောင် မိန်းမ က ဗီးနပ်နဲ့ နင်လား နင်လားပဲ!!
အီတလီသွား ပြီး David တို့ Rape of Sabine women တို့ သွားကြည့် ပါလားဗျ
18 အောက်တွေ ဝင်ဖြစ်အောင် ဝင်ကြည့်ကြမှာ သေချာတယ်။
အခုတောင် ကျွန်တော် ဝင်ကြည့်မိပြီ
ဗီးနပ်စ်ကို လက်ဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းလေး… လုပ်ပါဦး..။
ပြောရရင်… အဲဒီခေတ်က.. ခါးတုတ်တင်ကားသမျှ.. ရင်ကလည်းသေးသဗျ…
သဂျီးကတော့ ဒေါင်းဥခန့်မျှ မပါရင်ကို မပီးတော့တာ…
အင်းလေ… ၅မိနစ်ကျိရင်တောင် အသက်ရှီတယ် ဆိုတော့ …တဖွဖွ ရွတ်နေမှတော့
(အငွေ့မစားတဲ့ မား … ရော့ပုံးဂီး မှ မန့်သည်)
အောက်ပါ link လင့်ခ က ရေးသားချက်တွေကို ကောက်နုတ် ရတာပါ၊
၁၈၂၀ ဧပြီလ ၈ နေ့ Greece ဂရစ်နိုင်ငံ Melos (Milo) မီလို(မိုင်လို)ကျွန်း က တူးဖော် တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး၊
ထိုစဉ်ခါကပင် လက်မောင်းတွေ မရလိုက် Missing ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း
The Venus de Milo was discovered on April 8, 1820 on the Aegean island of Melos, thenabackwater under the indifferent rule of the Ottoman Turks but subject politically to the influence of France.
Olivier Voutier, an ensign in the French navy, whose warship had been idling in port, was searching for Greek antiquities whenalocal farmer, while removing stones from an ancient wall nearby, uncovered the statue. It was found in several pieces—a nude upper torso,adraped lower body, and part of the right hip that, when put in place, allowed both parts to fit together without toppling over.
The arms were missing but Voutier was convinced that the sculpture wasamasterpiece and hurriedly returned with the local vice-consul to persuade him to buy it. Meanwhile, the farmer had continued to dig and foundahand holding an apple, two herms standing on inscribed bases, andafragment of an upper arm….
လက် ၂ ဘက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်မယ်ဆိုတာ
အောက်ပါ link လင့်ခ ကို နှိပ်ပါ၊ Photoshop လုပ်ထားတာ၊
Venus de Milo isafamous Greek statue now in the Louvre. She’sabeautiful young woman whose tunic is about to slip off her hips revealing more than just her already bared breasts. This marble statue is believed to be from the period 130 – 100 B.C. It was found on the Isle of Milos in 1820, with its arms in fragments (now lost). The left hand was holding an apple.
အောက်ပါ Wikipedia link လင့်ခ ဆိုတာက အစ ကထဲက လက်တွေ ပျောက်နေတာပါ၊
Greek ဂရစ် ဓမြ တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရင်း မြေကြီးပေါ်ကနေ အတင်းဆွဲပြေးရလို့ လက်တွေ
ကျိုးခဲ့ရကြောင်း ပြောတာဟာ လုပ်ကြံပြီး ပြောတာပါ၊
စောစောပိုင်း တူးဖော်တွေ့ရှိတုန်းက ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပန်းချီကားချပ်မှာ လက်တွေ မပါ ပါ၊
လက်တွေပါရင် ဘယ်လိုပုံဖြစ်မယ် ကိုလဲအဲဒီ Wikipedia ကနေ ကြည့်နိုင်တယ်၊
…. Before he could take delivery, French sailors had to fight Greek brigands for possession. In the mêlée the statue was roughly dragged across rocks to the ship, breaking off both arms, and the sailors refused to go back to search for them.
This story however proved to beafabrication – Voutier’s drawings of the statue when it was first discovered show that its arms were already missing (Curtis, 2003).
၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရဆိုတော့ ကျနော် ၀င်ကြည့်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့
၁၈ နှစ်အောင်မကျိရဆိုပီး ဆင်ဆာတွေပိတ်ထားတော့ ၁၈ နှစ်အထက်တွေမတန်ဘူးဖြစ်ကုန်သပေါ့ ဒါတောင် သဂျီးကရအောင်ဘယ်လိုကျိသွားလဲမသိဘူး သေးသေးလေးဆိုဘဲ :byee:
ရာဇွင်ထဲမှာ ဒဂျီးကို ဒေါင်းဥနဲ့အတူ ထားရစ်ခဲ့…
ဟိုးဟိုး ဆရာကြီး ကိုကျီးမိုက်၊
အပေါ်က link လင့်ခ တွေမှာ ဆရာကြီးရဲ့ အသက်ရှည်ဆေးရှိတယ်နော်၊
လိုသလို ရှာယူမှီဝဲ နိုင်ကြောင်းပါ၊
မပေါ်တပေါ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ
ဟိုးးးး ရှေးပဝေတဏီ ကတည်းကပဲ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ
ဒီရုပ်တုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိသာတယ် ….။
တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောရဦးမယ် …
ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောနဲ့နော် ..
အဲ့ဒီ လက်ပြတ်တွေက ကျုပ်ရှိမှာ ရှိတယ် …